बिहिबार, वैशाख २३, २०७८ ०८:४७:३९ युनिकोड
नेत्रावती डवजोङ गाउँपालिकामा कृषि, खानेपानी,सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम भईरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्ग कुमार शाक्यले बताउनु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘ समृद्ध नेपाल सुखि नेपाली बन्नलाई बाटो निर्माण भएर मात्रै हुदैन जनताको जिवन स्तर उकास्न सकियो भने मात्रै समृद्ध नेपाल सुखि नेपाली बन्छ ।
हामीले त्यो हैसियत बन्नको लागि कृषि उत्पादनमा जोड दिईरहेका छौं । यस्तै गाउँपालिकाको समग्र विकास, भावी योजना,कोरोना बिरुद्ध गाउँपालिकाले गरेको गतिबिधि तथा गत वर्ष २०७६/७७ को समिक्षा र आर्थिक वषए २०७७/८८ मा समाबेश भएका कार्यक्रमका बिषयमा जनतासँग रेडियो प्रमुख रेडियो कार्यक्रममा पत्रकार रामकुमार थापाले तिनै नेत्रावती डवजोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्ग कुमार शाक्यसँग गर्नुभएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंशः
१.आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा गाउँपालिकाले कस्ता–कस्ता कायक्र्रमहरु ल्याएको थियो कति सम्पन्न गरियो ?
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को कार्यक्रम सडक, खानेपानी, कृषि सिँचाई, शिक्षा,स्वास्थ्य सबैलाई कमेटेर कार्यक्रम ल्याएका थियौं । यो पूर्वाधार विकास क्षेत्रको कार्यक्रम हाम्रो धेरै कार्यक्रमहरु सकियो । केहि कार्यक्रमहरु सकिएन । त्यसलाई क्रमागत रुपमा काम गर्ने भनेर २०७७/०७८ को कार्यक्रममा राखेका छौँ ।
यो वर्ष हामीले कोभिड–१९ को वाबजुत पनि थोरै आंशिक रुपमा काम हुन नसकेको कुरालाई त्यत्ति ठुलो मानेका छैनौँ । किनकि यो वर्ष कोभिड–१९ कै कारणले गर्दा धेरै कामहरु समयमा गर्न नसकेको कारणले गर्दाले पनि अलि गाह्रो परेको हो । आन्तरिक रुपमा दुई चार वटा योजना बाहेक अरु सबै हाम्रो विनियोजन भएका रकमहरुको कार्यन्वयन भएको छ ।
२.यतिखेर गाउँपालिकाले कारोना भाईरस संक्रमण रोकथाम तथा न्युनिकरणको लागि यो आर्थिक वर्षमा के–के गर्यौ ?
हाम्रो गाउँपालिकामा एक जना विदेशबाट आउनु भएको भाई लगाएत अरुलाई पनि देखा परेको थियो । उहाँहरुलाई १४ दिन सम्म क्वारेन्टाईनमा राखेर आरडिटी टेष्ट समस्या देखिएको थियो भने पीसिआर टेष्ट गरेर सल्लाह अनुसार घर पठाउने गरेका थियौँ ।
३.भनेपछि अहिले नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या शुन्य छ ?
एक जना व्यक्तिलाई देखिएको थियो त्यो पनि निको भईसकेको अवस्था । अहिले सम्मको अवस्थामा गाउँपालिकामा कोरोनाको अवस्था शुन्य छ । एउटा हिसावले भन्ने हो भने हाम्रो गाउँपालिका ग्रीन जोनमानै पर्छ ।
४.आगामी आर्थिक वर्षको लागि गाउँपालिकाको विकासको लागि कस्ता–कस्ता निर्माण योजनाका कामहरु अगाडी सार्ने छौं ?
हामीले आधारभुत विकास देखि लिएर महिला बालबालिका अपाङगता सबैलाई समेट्ने गरेर त्यस्तो खालको कार्यक्रम राखेका छौँ । रोजगारको सिर्जनाका कार्यक्रमहरु, कृषिको क्षेत्रमा पनि फलफुलको विरुवाहरु वितरण कार्यक्रमहरु राखेका छौँ ।
त्यस्तै भेटेरीनरीको क्षेत्रमा, शिक्षामा पनि कम्तिमा १७/१८ प्रतिशत रकम छुट्याएका छौँ । हामीले पूर्वाधारको क्षेत्रमा ल्याएका छौं । यो वर्ष धेरै भन्दा धेरै ठाउँहरुमा खानेपानी पुरा गर्ने अवस्थामा छौँ । केहि ठाउँमा यहि कोरोनाको कारणले रोकिन सक्छ । नत्र अरु ठाउँमा खानेपानी पुग्नेछ ।
५.निर्वाचनको समयमा खाानेपानीको काम अन्तिम चरणमा पुग्न सक्छ ?
सम्भावना मैले देखेको अनुसार धेरै खानेपानीका कामहरु पुरा गर्छौ,यो वर्ष । एक घर एक धाराको निति अनुसार लगभग सक्छौं ।
६.अन्य स्थानसम्म जाने बाटोलाई कालोपत्रे गर्ने त्यो आगामी आर्थिक वर्षमा कसरी अगाडी बढाउनुपर्छ ?
सडकको काम यो वर्ष ग्रावेल र स्तरओन्नतीको कार्यक्रमहरु छ । थर्पु बाट भोक्टेनी सम्मको एउटा ग्रावेलको काम छ । भोक्टेनी देखि लिएर ताङजोमाने २ नम्बर वडाको सिमाना सम्म पनि ग्रावेलको काम छ । गत वर्षकोनै ग्रावेलको कामहरु सुरु भएको छैन । अहिले वर्षातको कारणले गर्दा पहिरो गएर अलि–अलि समस्या आएको छ । अरु वडामा वडा कार्यालय सम्म जाने बाटोहरु राम्रै छ ।
७.गाउँपालिकाको भवन निर्माणको टेन्डर प्रक्रिया अगाडी बढ्यो ?
यो आर्थिक वर्षमा हाम्रो टेन्डर प्रक्रिया यो भदौमा अगाडी बढ्ने छ । हामीले प्राप्त गर्ने जग्गा २५ रोपनी गाउँपालिकालाई मागेका हौं । २२ रोपनी प्राप्त भईसकेको छ । कोरोना र लकडाउनको कारणले गर्दा ३ रोपनी पास गर्न समस्या भएको हो । त्यो ३ रोपनी प्रहरीलाई पास गरिदिने र गाउँपालिकाको कार्यालय र प्रहरी कार्यलयसँगैं राख्ने योजनामा छौँ ।
८.गाउँपालिकाको विकास पनि हुने र वेरोजगार युवाहरुले रोजगारी पनि पाउने त्यस्तो कार्यक्रमहरु गाउँपालिकाले राखेको छ ?
त्यसको लागि हाम्रो गाउँपालिकाले ४० लाख पैसा राखेको छ । दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने र खाद्य संकट पर्ने व्यक्तिहरुलाई परिचालन गरेर राहत स्वरुप दिने छौँ । अर्को कुरा स्वरोजगार सहकारी सँग जोडेर ५३ लाख जति पैसा छ । हामीले उहाँहरुको समस्यालाई मध्यनजर गरेर अगाडी बढ्ने छौं । हामीले जति समय सम्म भ्याउने छौं,त्यति समय सम्म प्रत्येक वर्ष अगाडी बढाउदै लैजाने छौँ यो कार्यक्रम ।
९.भनेपछि त्यो कार्यक्रमलाई सफल कार्यक्रमको रुपमा पनि राख्न सकिन्छ नि होईन र ?
त्यसलाई तपाईले भनेको जस्तो तरिकाले हेर्दा त्यसलाई हामीले सफल कार्यक्रमको रुपमा लिन सकिन्छ र त्यो देशकै हिसावले भन्नुपर्दा केन्द्रले पनि त्यसलाई अनुमोदन गरेको देखियो । त्यो भएको कारणले हाम्रो हिसावमा यो कार्यक्रम सफल कार्यक्रम हो ।
१०.गाउँपालिकाले वातावरण सफा राख्ने भन्ने हिसावले अठोट गरेका थियौं त्यो डम्पिङ साईटको ठाउँ परिवर्तन हुन्छ कि कसरी गर्ने योजनामा छौं ?
डम्पिङ साईटको केहि बजेट पनि थियो । यो लकडाउनले गर्दा त्यसको लागि केहि सम्स्या आएको हो । त्यो ठाउँ अभावको कारणले गर्दा समस्या भएको हो । अब समय अनुकुल भएपछि हामीले उपयुक्त ठाउँमा काम अगाडी बढाउने छौँ ।
११.वास्तवमा नेत्रावती डवजोङ गाउँपालिकामा मध्यपहाडी लोकमार्गको समस्या के हो ?
मध्यपहाडी लोकमार्ग बुढिगण्डकी आयोजनाकै कारणले रोकिएको कारणले गर्दा विवादमा आएको हो । बुढिगण्डकी आयोजनाका कारणले तल बाट लैजाने कि माथि बाट लैजाने भन्ने कुराहरु आयो ।
एकाथरिका साथीहरुले तल बाट लैजाने भन्ने कुरा आयो भने अर्को थरिले माथि बाट लैजाने भन्ने कुराहरु आयो । अब पहिला जहाँबाट सर्वे गर्यो,तल्लो भाग बाट त्यही भाग बाट जाने कुरा निश्चित भयो अब टेन्डरको प्रक्रियामा अगाडी गईसकेको छ ।
१२.अब हामीले पालिका जाने सडकहरु स्तरओन्नतीको कामलाई यस आर्थिक वर्षमा अगाडी बढाउने छौं ?
गत वर्ष र अहिलेको वर्षको गरेर १० करोड बजेट बाँकी रहेको छ । गत वर्षको अझै ६ करोडको काम हुनै बाँकी छ । यो वर्ष पनि ६ करोड त सडक निर्माण गर्नमा नै ठिक हुन्छ । सडकको स्तरोन्नती तर्फनै हाम्रो काम हुन्छ । हामीले पर्यटनको क्षेत्रमा कुरा गर्दा वाकाराहामा हामीले पिक्निक स्पोर्ट र खानेपानीको व्यवस्था गरिसकेको अवस्था छ । वाकाराह देखि लिएर ताङजोमाने सम्म्को पदमार्गको लागि लकडाउनले गर्दा सकेनौं । त्यसको लागि फाईल बुजाउन गएका थियौं,लकडाउनले गर्दा बुझाउन सकिएन ।
१३.विन्दुकेशरा महादेवको निर्माण प्रक्रियालाई यो आर्थिक वर्षमा पुर्णता दिन सक्छौं ?
त्यसको सम्पुर्ण काम ठेक्का भएर सुरु भईरहेको छ । एउटा ट्स्र्टको छाना सहितको एउटा भवन बनिसकेको छ । त्यहाँ अब बन्न बाँकी शौचालय पनि बन्दै छ । अर्को महादेवको मन्दिर बाट पावर्तीको मन्दिर सम्म जान बाटो बन्न बाकी छ । यो वर्ष त्यो काम पुरा हुनेछ ।
१४.प्रत्येक वडामा कम्तिमा एक वटा गाउँपालिका स्तरीय गौरवका आयोजनाहरु संचालन गरिने भनिएको छ,त्यसमा कसरी जोड्न खोजीएको हो ?
हामीले गौरवको आयोजना भन्दा धेरैको दिमागमा बाटो पानी भन्ने कुरा गर्छौँ । हामीले गौरव भनेको कृषिलाई परिवर्तन दिनु भयो र किसानहरुलाई आत्मिनिर्भर बनाउनुपर्यो भन्नेनै हो हाम्रो कुरा ।
त्यसलाई कृषि मार्फत् नै अगाडी बढाउन पर्यो भनेका छौँ । हामीले पकेट क्षेत्रहरु स्थापना गरेर कृषकहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने ,मन्दिरहरु बनाउने । तर ती मात्रै होईन गौरवको कुरा कृषकहरुलाई आत्मानिर्भर बनाउनुनै आत्मनिर्भर हो भन्ने हिसावले अगाडी बढेका छौँ ।
१५.गाउँमा भएका युवाहरुलाई के गर्ने वातावरण कसरी गर्न सकिएला ?
हामीले काम गर्ने साथीहरुलाई अनुदानको व्यवस्था पनि गरेका छौं । गाउँमा व्यापक रुपमा कृषि गर्न अगाडी बढेका छन् । हामीले गर्न सक्ने कुराहरु धेरै छन् । हामीले परिमाणको आधारमा अनुदान दिने भनेका छौं । हामीले विशेष जोड गाउँपालिकामा कृषि र पर्यटनमा दिएका छौं ।श्रम बैंकको स्थापना गरेर युवाहरुलाई त्यही बैंक बाट अनुदान दिएर व्यवसाय गर्न सहयोग गर्नको लागि स्थापना गर्नेछौं ।१६.गरिबसँग गाउँ सरकार कार्यक्रम भनेको सिमान्तकृत, महिला, दलितका लागि ल्याउने कार्यक्रम हो ?
त्यसमा हामीले लैङगीक रुपमा समावेशी कार्यक्रमहरु पनि राखेका छाँैं । जुन विपन्न, सिमान्तकृत, पिछडीएका र दलित समुदायका व्यक्तिहरुको जिवन स्तर उकास्नको लागि त्यो कार्यक्रम गर्नेछौँ ।
१७.अब गाउँपालिकामा खानेपानीको मुहानको विवाद गर्न पाईदैन होईन ?
गाउँपालिका खानेपानीको आपूर्ति गर्नको निम्ती कुनै पनि वडामा परेको खानेपानीको मुहान लैजान पाईन्छ । त्यो खानेपानीको मुहान दर्ता गराउन पनि पर्दैन ।
१८.हामीले अहिलेको आर्थिक निति तथा कार्यक्रममा शिक्षालाई कसरी राखेका छौं ?
यो वर्ष हामीले गाउँपालिकामा शिक्षकहरुको लागि तालिम, कार्यालय सहयोगी र बालविकासका केन्द्रका तहकाहरुको लागि गत वर्ष जसरी हमीले सेवा सुविधालाई निरन्तरता दिएका छौँ । यसरी हामीले शिक्षाको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याएका छौं । कसरी विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको पढाईमा राम्रो गर्न सक्छौं भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याएका छौं । यो वर्ष पनि झण्डैं हाम्रो वित्तिय समानिकरणको १७/१८ करोड प्रतिशत पैसा शिक्षामा छुट्याएका छौं । हामी कहाँ केन्द्र बाट पनि शिक्षाको लागि रकम आएको छ । शिक्षालाई पनि हामीले जुनसुकै कामा गर्नको लागि पनि पुग्ने बजेट राखेका छौं ।
१९.अब यो आर्थिक वर्षमा मुहार फेरिने गरि गाउँपालिकाको विकास हुन्छ ?
हामी आउँदाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा धेरै फरक छ । पहिला धेरै मानिसहरुले डोकोमा पानी बोकेर खाने गर्दर्थे भने अहिले त्यो अवस्था छैन । ठाउँ–ठाउँमा विजुली बत्ती पुगिसकेको अवस्था । काठे पोल मुक्त गाउँपालिका बनिसकेको छ । हामीले सबै कुराहरुलाई समेटेका छौं । त्यसैले विगत हेर्दा त्यत्ति धेरै समस्याहरु देखिदैन ।
२०.प्रकाश तामाङ (कृषि लोन कसरी लिने ?)
कृषिको फर्म दर्ता गर्ने ,कृषि सहकारीमा पनि दर्ता गर्ने कर चुक्ता गरेको प्रमाण पत्र हुनपर्यो, गाउँपालिकाले पनि त्यसलाई सिफारिस गर्नुपर्यो, जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रले पनि त्यसलाई सिफारिस गर्न सक्छ । अब कृषिनै गर्ने भनेर लाग्नु भयो भने सस्तो ब्याजदरमा लोन लिन सक्नुहुन्छ यदि समस्या परे हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला हामी सहयोग गर्नेछौं ।
२१. तपाईको यो महत्वपुर्ण समय र सम्वादलाई धन्यावाद ।
केहि कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, नीलकण्ठ एफ.एम सम्पुर्ण परिवारलाई धन्यवाद ।